अस्पताल प्रांगणमा दुई घण्टा सम्म छटपटीए यी बिरामी , तर अक्सिजन नपाएर भयो मृत्यु – Classic Khabar
अस्पतालको प्रांगणमा दुई घण्टासम्म छटपटिंदा पनि अक्सिजन नपाएकी बाँकेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बैजनाथपुर गाउँपालिका–५ की ४६ वर्षीया महिलाको बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो ।
उपचार पाउने झिनो आशामा आफन्तले उनलाई दुई घण्टासम्म अस्पताल प्रांगणमै राखे । बिरामी भर्ना गरिदिन आग्रह गरे । आइसोलेसन सेन्टरका संयोजक डा. प्रदीपकुमार चौधरीका अनुसार विरामीलाई आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याउनासाथ अक्सिजन लेभल जाँच्ने प्रयास गरिएको थियो । ‘तर अक्सिमिटरले अक्सिजन लेभल रिड गरेन ।
त्यसपछि अक्सिजन सपोर्ट दियौं, तर पनि उनलाई बचाउन सकिएन’ उनले भने । तर अस्पतालले भर्ना नलिएपछि आफन्तले अटोरिक्सामा राखेर बैजनाथपुर–५ मा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन सेन्टरमा पुर्‍याए । उनको त्यही मृत्यु भएको छ ।
वैशाख १९ र २१ गते नै अक्सिजन अभावबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् ।अक्सिजन अभावले आउनसक्ने ठूलो संकटबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको उनले बताए ।
Prevशिक्षकले किशोरी छात्रालाई फकाएर सुन्धाराको होटलमा लगेपछि….
Nextकोरोनाले बाँकेमा ८३ बढ़ीको ज्यान गयो,अस्पतालले निकाल्यो सुचना, भन्छ अब नयाँ बिरामी लीन सक्दैनौ (भिडियो सहित)
यस्ता त्यागी पति जसले आफ्नै श्रीमतीको बिहे उनका प्रेमीसँग गराइदिए….